Homeसमाचारबल्ल मुख खोले नायक आकाश श्रेष्ठले,भेने “पुजाको खुशी नै मेरो सब थोक हो”(भिडियो सहित)
December 24, 2020 admin समाचार 6773
नायिका पुजा शर्माको जन्म २०४९ बैशाख् १८ गते सिन्धुपा’ल्चोक जिल्ला’मा भएको हो । उनले नेपाली कथानाक चलचि’त्र थ्रि लबरबाट यस क्षेत्रमा प्र’वेश गरेकी हुन् । चलचित्र थ्रि लबर को निर्दे’शक चलचित्र पत्रकार सुरेश दर्पन पोख्रेल हुन । नायिका पुजा शर्माको स्टारडम कति छ ? उनकै कारण चलचित्र चल्ने सम्भा’वना छ त ? यसअघिका चलचित्र उनकै कार’ण चलेका छन् ?
उनले चलचित्र अझै’पनि, चंखे शखे पंखे, प्रेम गीत, मधुमास, म यस्तो गीत गाउँछु र रामक’हानीमा काम गरिसकेकी छिन् । उनको अर्को चलचित्र सम्हालिन्छ कहिले मन को सम्पूर्ण नि’र्माण कार्य सकिएर प्रदर्शनको तयारीमा छ । पुजाका अहिलेस’म्मका चलचित्र हेर्ने हो भने व्लकवस्टर चल’चित्र प्रेमगीत मात्रै हो । पुजा शर्मालाई सुहा&एको जोडी नायक प्रेम गीतमा प्रदिप खड्का, म यस्तो गीत गाउछुमा पल शाह र सबै भन्दा सुहा’एको र दर्शकले मन पराएको जोडी राम काहा’नीमा आकश श्रेष्ठसँग हो । भिडियो सहित – इताजा खबरबाट
मेरो ब्वाइफ्रेन्डले मलाई एयरर्पोटमा पर्खिरहेको छ, भन्ने गंगा यस पटकपनि कोरियन ब्वाइफ्रेन्डलाई भेट्न पुगीन् एयरपोर्ट, संगै आएकी आमाको आँखाबाट रोकिएनन् आँशु (भिडियो हेर्नुहोस्)
October 22, 2020 admin समाचार 9851
April 13, 2021 admin समाचार 4208
April 28, 2021 admin समाचार 4174
सडक दु’र्घटनामा मृ’त्यु भएका एक व्यक्तिको श’व अस्पतालमा थियो । श’वको पोस्ट-मा’र्टम गर्ने तयारी भइरहेको थियो । त्यही बेला पोस्ट-मा’र्टम गर्न लागिएका मृ’तक सडकको चौ’राहामा चिया पि’उँदै ब’सेको ख’बर आएपछि ए’काएक ह’ल्लाखल्ला भयो । भारतको